Raadinta U doodayaasha si ay u qaabeeyaan mustaqbalka St Werburghs City Farm
St Werburghs City Farm waxay kuugu baaqeysaa adiga, bulshada, inaad naga caawiso sameynta koox xeelad horumarineed leh. Kooxdani waxay ka koobnaan doontaa ku dhowaad 10 u doodayaal oo leh aagag gaar ah oo ay xiiseynayaan waxayna matali doonaan kooxda cilmi baarista waxqabadka ee St Werburghs City Farm.
St Werburghs City Farm waxay doonaysaa inay noqoto meel soo dhowaynaysa dhammaan bulshooyinka iyo dhaqamada isla markaana ay ku xirmaan oo ay ku xoojiyaan dadka deegaanka shaqadooda. Dhisida Warbixinta Sinaanta ee Beerta iyo casharadii laga bartay intii lagu jiray 2020, St Werburghs City Farm waxay go'aansatay inay dib u qiimeyso istiraatiijiyadeeda mustaqbalka.
Istaraatiijiyadda cusub waxay noqon doontaa mid loo dhan yahay codadka kala duwan ee bulshadeena maxalliga ah waxayna u horseedi doontaa Beerta inay noqoto urur lala qabsan karo - awood u leh inay ka jawaabto waqtiyadii aan horay loo arag ee aan ku jirno.
In dib loo qeexo himilada urur ahaaneed
Si loo ogeysiiyo horumarinta qorshe hawleed 3 sano ah
In la sameeyo farsamooyin iyo tusaale loogu talagalay wadatashiga daneeyayaasha oo macno leh oo waara
Tobanka u doode waxay ka koobnaan doonaan dad ka socda bulshada, kuwaas oo aan rajeyneyno inay matalaan wakiil ahaan. In kasta oo aan qireyno in qof keliya uusan matali karin aragtida koox dhan, meelaha xoogga la saaray ayaa loo isticmaalay si loo hubiyo in codka iyo ra’yiga dadka la gacan bidixeeyo la tixgeliyo geeddi-socodka.
Maxaad samayn doontaa?
U-doode kasta waxaa la weydiin doonaa inuu diirada saaro danaha kooxaha daneeyayaasha ee hoos ku xusan. In kasta oo aan la dhagax dhigin, kooxahan daneeyayaashu waxay ka koobnaan doonaan:
U doodaha Bulshooyinka Madowga, Aasiya iyo Qowmiyadaha tirada yar
U doodaha Cimilada, Dabeecadda iyo Duurjoogta
U doodaha dadka deegaanka
U doodaha shaqsiyaadka dabaqadaha shaqeeya iyo kuwa ka soo jeeda dhaqan-dhaqaale hooseeya
U-doodaha Xubnaha Shaqaalaha Beerta
U doodaha Caafimaadka Dhimirka iyo Ladnaanta
U doodaha Naafonimada & Helitaanka
U doodaha dhalinyarada (18-25yrs)
U doodaha carruurta (Ka yar 18 sano: Waxaad ka mid noqon kartaa kooxdan ama waxaad noqon kartaa xirfadle la shaqeeya kooxda da'dan ah)
U doodaha Waalidiinta
U doodaha Shaqsiyaadka khaniisiinta
U doodayaasha waxaa la siin doonaa kaar qiimihiisu yahay £50 qofkiiba, kalfadhi kasta. Kaarka wuxuu noqon doonaa tafaariiqle uu doorto qof walba. Iska casilaada doorkan waa la oggol yahay marxalad kasta. Doorkan waxaa lagu qaban doonaa khadka intarneetka iyadoo ay sabab u tahay COVID-19. St Werburghs City Farm waxay hubin doontaa helitaanka ilaha, tababarka iyo tiknoolajiyadda dhammaan u doodayaasha u baahan si ay uga qeyb qaataan shirarka qadka intarneetka.
Waxaan raadineynaa shaqsiyaad xiiseynaya, ama doonaya inay wax badan ka bartaan, dabeecadda, beerashada iyo deegaanka.
Waxaan raadinaynaa shaqsiyaadka muujiya rabitaanka ah in dadka kale loola dhaqmo si ixtiraam leh oo raba inay noqdaan wax loo dhan yahay.
Waxaan raadinaynaa shaqsiyaadka raba inay taageeraan St Werburghs City Farm iyo inay abuuraan isbedel bulsho oo wanaagsan.
Waxaan sidoo kale ku darnay kootooyin kooxda u doodaysa si loo hubiyo inaan haysanno talooyinka ugu ballaaran ee suurtogalka ah. Kootadaas waxaa ka mid ah:
40% Dheddig, 40% Lab iyadoo u oggolaanaysa 20% kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka jinsi ahaan, ama shakhsiyaadka isu aqoonsada inaysan midna ahayn.
Ugu yaraan 40% u doodayaashu waa inay ka soo jeedaan bulshooyinka Madow, Aasiyaanka iyo Jinsiyadaha laga tirada badan yahay.
Sidee kal-fadhiyada u socon doonaan?
Ugu horreyntii kal-fadhiyada waxaa fududeyn doona Dr. Adelaine oo ka tirsan Ladders4Action, oo ay caawinayso The Network Project. Si kastaba ha noqotee, inta kooxdu sii socoto, waxaa la rajaynayaa in xubnaha kooxdu ay la wareegi doonaan hoggaan firfircoon oo soo bandhigaya ra'yigooda taas oo u horseedi doonta isbeddel la taaban karo oo ku yimaada istiraatiijiyadda St Werburghs City Farm.
Haddii Ingiriisigu yahay luuqadaada labaad oo aad rabto inaad caawimaad ka hesho turjumaan si aad u dalbato fadlan iimeel u dir office@swcityfarm.co.uk ama wac 07545 557001 illaa Isniinta 8-da Maarso annaguna waan diyaarin doonnaa tan.
Codsiyada waxay xirmayaan 5 galabnimo maalinta Jimcaha 12ka Maarso
Ku buuxi warqad ama foomka dalabka onleenka ah Ingiriis adigoo gujinaya lifaaqa hoose:
Buuxi foomka onleenka ah